Mid ka mid ah haweenka u dhaq dhaqaaqa arrimaha bulshada oo ku dhawaaqday Musharax Xildhibaan – STAR FM SOMALIA
Mid ka mid ah haweenka u dhaq dhaqaaqa arrimaha bulshada oo ku dhawaaqday Musharax Xildhibaan
Madiina Caamir Maxamed oo ka mid ah Haweenka u dhaq dhaqaaqa bulshada rayidka ayaa magaalada Nairobi kaga dhawaaqday inay tahay musharax u taagan kursiga Xildhibaanimo ee Baarlamaanka Federaalka ah ee doorashada soo socoda.
Munaasabad shalay ka dhacday Hotelka Grand Royal ee magaalada Nairobi oo ay ka soo qeyb galeen waxgarad, dhalinyaro, haween, aqoonyahano iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee Kenya ku dhaqan ayaa waxay taageereen musharaxnimada Madiina Caamir.
Qaar ka mid ah dadkii ka hadlay munaasabada ayaa waxaa qireen in Madiina Caamir ay tahay qof waayo arag ah, xilal kala duwan horay uga soo qabatay dowladihii hore.
Xabiiba Maxamed Cubeyd oo ka mid aheyd haweenkii ka hadlay munaasabada ayaa sheegtay inay taageersan tahay musharaxnimada Madiina Caamir.
Waxaa kaloo munaasabada ka hadlay Mahdi Xuseen, Shukri Maxamed Afrax, Aweys Xaaji, Macalin Ciise iyo Dr. Cadaay, kuwaasoo dhamaantood qiray howl karnimada iyo waayo aragnimada Madiina Caamir.
Waxaa ay aad ugu ammaaneen in arimaha qoditaanka ceelasha, biyaha iyo u gargaarida dadka tabaaleysan ay Marwo Madiina Caamir Maxamed ay aad uga qeybqaadatay ayadoo hawlaha masaajida aad ugu qumtay si dhiiranaan leh oo habboona xil isaga saartay miyi iyo magaalaba.
Marwo Madiina ayaa xilal ka soo qabatay banggiyo kala duwan oo Soomaaliya ka jiray ka hor bur burkii dowladdii dhexe iyo Laanta Waaxda Duulimaadka, iyadoo soo noqotay Agaasimaha Waaxda Duulimaadka.
Sidoo kale waxy horay uga soo shaqeysay arrimaha bani’aadanimada iyo gargaarka kadib bur burkii dowladdii dhexe ee 1991.
Ugu dambeyn Madiina Caamir oo ka hadashay munaasabada ayaa sheegtay in hadii loo doorto Xildhibaan ay u shaqeyn doonto dalka iyo dadka Soomaaliyeed, ayna ugu adeegi doonto si daacadnimo oo danta iyo diinta ku jirto.
Waxay ka codsatay Umadda Soomaaliyeed inay ku taageeraan musharaxnimadoo, waxaana ay sheegtay inay u ololeyn doonto hadii ay ku guuleysato arrimaha bulshada, sida kaabayaasha dhaqaalaha, sida korontada, caafimaadka, biyaha iyo jidadka.
DHAGEYSO:-Warka Duhur Starfm 23-08-2016
Howlgal ay horkacayaan Saraakiil Ciidan iyo masuuliyiin oo Hiiraan ka biloowday